SomaliaReport: DKMG oo Al-Shabaab Ka Qabsatay Badhaadhe
By MOHAMED ODOWA, SHIINE OMAR 02/03/2012
Ciidamada Dawlada Ku Meel Gaarka (DKMG) Soomaaliya oo ay isgaashaan buursadeen malayshiyaadka Raas Kaambooni ee taageersan dawlada iyo Ciidamada Difaaca Keenya (CDK) ayaa maanta gacanta ku dhigay degmada badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaalia iyadooo saraakiisha degaanku soo tabiyey in dagaalyahanada al-Shabaab ay isaga bexeen aaga.
Afhayeenka ciidamada DKMG ee Jubbada Hoose, Maxamed Daahir Faarax ayaa Somalia Report usheegay, “DKMG, Raas Kaambooni iyo CDK ayaa qabsaday degmada Badhaadhe ee Jubbada Hoose kadib markii al-Shabaab ka carartay magaalada markii dagaal fududi dhacay. Waxay arkeen inaysan noo babacdhigi Karin. Dagaalkani wax khasaaro uma gaysan anaga iyo shicibkaba.”
“DKMG iyo ciidamada taageersan ayaa degmada badhaadhe gudaheeda iyo xeedaankeeda ku sugun iyagoo nabada magaalada ku sugan,” ayaa mudane Faarax sheegay isagoo ku baaqay inay dagaalka wadayaan ilaa ay fallagada ka saaraan gobolka.
Saraakiisha Raas Kaambooni ayaa sheegay inaan wax dagaal ahi dhicin.
Sarkaal sare oo ah saraakiisha Raas Kaambooni, cabdinaasir Seeraar ayaa Somalia Report khadka telefoonka ugu sheegay, “wax dagaal ah kama dhicin meeshan maanta oo dagaalyahanada al-Shabaab way carareen, haddana anagaa gacanta ku hayna dhamaan isbaarooyinka magaalada.”
Saraakiisha al-Shabaab ayaa xaqiijiyey inaysan magaaladu gacantooda ku jirin.
Dadka degaanka ayaa sheegay in ciidamada, hubka iyo gaadiidku aad ufara badnaayeen.
“Ciidamo aad u fara badan ayaa jooga. Badhaadhe waligay kuma arag ciidamo intaa le’eg,” waxaa Somalia Report usheegay qof degaanka ah oo aan ismagacaabin.